HS:- Dalka Soomaaliya marka mushkiladiisa laga faaloonayo siiba dadka aan si fiican xog ogaal u aheyn waxey hadalkooda ku soo gaabiyaan maxey Soomaalidu u heshiin la tahay qaran Soomaaliyeedna loo heli la yahay?
Laakinse markaad u guurgasho sida ay beelaha Soomaaliyeed qaarkood fowdada ugu naaxeen ayna iskaka dhaadhiciyeen in aan qaran Soomaaliyeed loo baahneyn iyo sidey iyaga dhexdooda isku lugooynayaan marka xitaa meel leyska dhigo lugooyada ay dalka ku hayaan waxaa kuu soo baxeysa amaba aad mararka qaarkood isleetahay kuwani Soomaali maahan waa masiibo dalka iyo dadka Soomaaliyeed loo soo diray.
Wax micno ah ma sameynayeso in aanu markasta ku celcelino magacooda mid ka mid ah beelaha dega gobolka Galgaduud iyo sida indho la'aanta ah ee ay uga soo horjeedaan sidii loo heli lahaa qaran Soomaaliyeed ee waxaa muhiim ah bal shacabka in loo iftiimiyo dhibta ay shacabka gobolkaas la degan ku qabaan, dhibta ay shacabka Soomaaliyed ee deriska la ah ku qabaan iyo midka ay guud ahaan dalka Soomaaliya ku hayaan.
Gobolka Galgaduud iyo shacabka iyo siyaasada maanta taalo.
Gobolka Galgaduud waa gobol ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya waxuuna ku yaalaa bartamaha Soomaaliya waana gobol dhul ahaan baaxadweyn kana mid ahaan jiray gobolka Mudug ka hor intii aysan dowladii Kacaanka gobolada dalka ka dhigin 18 gobol.Gobolku waxuu soohdin la wadaagaa degaano ay ka mid yahiin amaba gobolada Hiiraan,Mudug iyo Ethiopia, dhinaca kalena waxaa ka xiga bada.
Hadaba waxii ka horeeyey burburkii dowladii dhexe Soomaalidu isma aqoon kaliya waxaa jiray colaado ku kobnaa dhulka miyiga ah ahaana kuwa ku kobnaa daaqa iyo meelaha ay xoolahu ka biyo cabaan oo ahaa kuwa mushkilada kaliya ee beelaha Soomaaliyeed qaarkood dhextiilay walow waxa ay isku dilayeen ayba iska aheyd wax sahlan oo hadii reerkasta degaankeeda loog aqodi lahaa ceel biyood dhibtu intaas wey ka yaraan laheyd laakinse waxey ku wanaagsanaayeen beeshu hadii ay xurguf kala dhzxeysay beel kale xumaan iyo samaan inta degaankaas degan isku mowqif ayey ka ahaayeen xumaan iyo samaan hadii beel kale lala heshiiyana sidii loo heshiiyo ayaa loo qaadan jiray.
Maanta dalka Soomaaliya waxa ka socda gobolka Galgaduud waxaan u kala qaadeynaa labo qodob.
Gobolka Galgaduud marka guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya laga hadlayo ma ahan gobol la dhihi karo waxaa kunool shacabka ugu nasiibka badan waa gobol ay kunool yahiin Soomaali kala duwan siyaasad ahaan shacabkaas waxaa la haray beesha ay ka soo jeedaan C/qaasim Slaad Xasan iyo Hasan Daahir Aweys si kooban u aqri sababta aanu u leenahay waxaa la haray beeshaas.
Galgaduud marka Soomaalida laga soo tago xitaa beesha caalamka marka ay ka hadlayaan dhulka Soomaaliya waxey u bixiyeen magacyo xun xun hayadaha qaramada midoobayna iskuma mashquuliyaan iney ka howlgalaan xitaa hadii qofka ay soo wakiisheen yahay Soomaali sababtoo ah.
1-Marka shacabka Galgaduud lasii kala qaado Dirta halkaas degan iyo beesha Sade waa dad uguyaraan lagu soo duwi karo amaba raba sidii lagu heli lahaa qaran Soomaaliyeed waxeysa la yahiin Habargidir wada socota oo arintaas diyaar u ah waxeyna ku soo aruureen sidii ay u nabadeysan lahaayeen degaanadooda amaba ,agaalooyinkii ay ka degenaayeen gobolka sida Caabuud waaq iyo Xeeraale.
Gobolka waxaa kale oo waayadii hore cod fiican iyo degaan muuqda ku lahaa beesha Murusade oo 15 kii sano ee ugu danbeysay ay maamulka iyo talada Ceelbuur kala wareegeen Habargidir siiba jufada Duduble ninkii ku yiraahdo qabiil Murusade la yiraahdo oo talo muuqato ku leh Galgaduud ayaa jiro waa shaqsi riyo kunool ah amaba lugooynayo dadkiisa iskana indho tiraya xaqiiqada gobolka Galgaduud maanta taalo.
Hadanse guda galno qaabka ay u wada shaqeystaan maamulka ay dowladu u soo magacaawday Galgaduud, Koox sheegata Ahalusuna iyo Shabaab waa sidan.
Gobolka Galgaduud siiba inta ay ka degan tahay beesha Habargidir sida magaalooyinka Cadaado, Dhuusamareeb iyo Gurceel waa sedaxda magaalo ee la sheegi karo ee ay beeshu degan tahay inta kale waa tuulooyin iyo goobo aan xitaa tuulo la dhihi karin oo ay kuyaalaan Baraakaha ay xooluhu biyaha ka cabaan.
Marka iyagaas la sii kala qaado magaalada caasimada ah ee Dhuuso-Mareeb iyo Tuulada aan sidaas uga fogeyn ee Guriceel waxaa si gooyni ah u degan Jufada Ceyrka ee ay ka soo jeedaan C?qaasim Salaad Xasan iyo Xasan Daahir Aweys.dib uguma laabaneyno siyaasadaha ay kala taageeraan C/qaasim iyo Xasan Daahir Aweys ee waxaa muhiim ah siyaasadaha maanta yaala Dhuusa-Mareeb iyo Guriceel oo hadii ay dowlada iyo Amsiom ku baraarugi waayaan waxa ka socda ay saameyn ku yeelan doonto xitaa deegaanada Puntland sida ay u wada shaqeystaan maamulka dowlada ee ka jira gobolka, Shaqsiyaad sheeganaya magac Ahalusuna aan jirin iyo xarakada Shabaab oo uu iyagu dhibtooda muuqdo.
Maamulka gobolka Galgaduud iyo qaabka uu u shaqeeyo?
Maamulka gobolka Galgaduud ee ay dowladu u soo magacaawday gobolkaas horta magac ahaan ayuu u jiraa maahane ma ahan maamul shaqeeya waxuuna magaalada Dhuuso-Mareeb ka joogaa gudoomiye Cirfo meelo kooban ciidamda aad maqashaan ee lagu leeyahay waa ciidamo dowladeed rumeyso ama ha rumeysan waa 70 wiil oo Ceyr ah oo dhamaantood kala ujeedo ah marka ay gobolka doonayaan iney booqasho ku tagaan wafti ka socda dowlada ayaa tuuto loo geliyaa mark auu waftigaas baxane waxaa loo xiraa cimaamado oo waxaa loogu yeeraa Ahalusuna. waxaa kale oo jira ciidamo aan cidna ka amar qaadan oo la sheego iney la shaqeystaan burcad badeeda oo uu xirir ka dhaxeeyo siyaasad ahaan magaalada Cadaado.
Laakinse markaad u baqoosho magaalada Guriceel waxaa si buuxda gacanta ugu haya dhalinyaro taageersan col Xasan Daahir Aweys magac ahaane loogu yeero Ahalusuna waxaana hogaamiyo nin la yiraahdo Taardguleed ciidamadaas iyo ninka hogaamiyo labo siyaabood ayey uga howlgalaan magaalada.
1- In ay dhamaan siiyaan xogta gurmadka dhinaca raashinka ah ee u socda ciidamada dowlada kuwooda ku sugan Hiiraan waxeyna dadka dowlada taageersan u sheegaan kooxda Shabaab iyagoo hadba u eegaya qabiilka ay ka soo jeedaan waxeyna dhacdadii ugu danbeysay ku sameeyeen wiil dhalinyaro ahaa oo watay gaari Zuzuki ah oo magaaladaas ka baxay kediba ay dhawaan Shabaab u galeen jidka intey dileena gaarigii ka qaateen.
2- Gaarigii maanta ku qarxay magaalada Guriceel waxaa qarxiyey isla ciidamadaas ka amar qaata Col Hasan Daahir Aweys si aan loo dameerim in ay fuliyeen qaraxaas waxey isla markii xiriir la sameeyeen idaacada Shabelle oo beeshaan u qaabilsan jahwareerinta bulshada Soomaaliyeed iyagoona sheegay in ay Al Shabaab ka danbeysay qaraxaas Shabaabka ay ka hadlayaan waa kuwa sheeganaya Ahalusuna ee jooga isla goobta uu qaraxu ka dhacay.
Maxey tahay faa'idada ugu jirta beeshaani fowdada iyagoo hal qabiil ahne magacyo kooxo kala duwan ku shaqeystaan?
Magacaan Ahalusuna horey ayaa xilal qaran loogu helay xiligii kumeel gaarka lagu jiray oo waxaa xilka wasiirka arimaha gudaha ku helay labo jeer Macalin Maxamud walaalkiis C/shakuur iyo wiil uu dhalay oo hada ka mid ah mudanayasha baarlamaanka walina riyadii ayaa lagu jiraa. Ahalusunada ay shacab badan maalinkasyta idaacadaha ka maqlaan ma ahan magacii fiicnaa ee dadka muslinka ah loogu yeeri jiray waayo dadka dhan ayaa wada Ahalusuna ah ee waa koox qaran diid ah oo dooneysa iney boqol maagc dowlada dhexe xilal ugu helaan oo sad bursi wado kuwaasi oo ka soo jedo madaxweynahii hore Cabdiqaasim Salaad xasan oo ilaah ka socokow madaxweyne dalkaas ka noqday kedib markii uu dadaal dheer u galay madaxweynaha dalka Jabouti Ismaaciil Cuamr Gelle oo islahaa xiligaas dalka Soomaaliuya waxaa dhib kuhaya beeshiisee armuu dalku degaa mar uun oo iyaga lagu tijaabiyaa xukunka dalka, waase la ogaa meeshii ay xukumadiisa cagadhigatay markii danbe iyo sidey beeshiisu u fashiliyeen.
Dhibta ay dalka ku hayaan C/qaassim Salaad Xasan beeshiisa iyo midka ay iyaga isku hayaan midkeebaa daran?.
Muhiim maahan in aanu waqti badan gelino dhibta ay iyaga isku hayaan laakinse waaxaa muhiim ah kan ay qaranka Soomaaliyeed ku hayaan iyo sida ay dalka u cuuriyaaminayaan in aanu waxoogaa iftiimino.
Horta ma jirto beel Soomaaliyeed oo la dhihi karo 100% ayey halmeel u wada socdaan laakinse waxaa jiro waxyaabo badan oo ay beesha uu ka dhashay C/qaasim Salaad Xasan uga duwan tahay beelaha kale ee Soomaaliyeed.
1- Iyagu horta sidey u badan yahiin ma jirto xishoodkii lagu yaqiinay shacabka Soomaaliyeed waxeyna waayadii hore ku asturnaayeen Soomalisu isma aqoon oo nabad ayaa jirtay markii ay degaanadaas ay degan yahiin ku jahwareeraane waxey nolol ka abuuran jireen dalka intiisa kale waxaana xiligaas Soomaalida iyo dalkaba Allaah ugu gargaaray waxoogaa sharci ah iyo kala danbeyn aan u saamaxeyn iney ku dhiiradaan wax badan oo ay hada sameeyaan.
Maanta kooda Ethiopia Safiirka ka ah isagoo masuuliyada qaran ku magacaaban waxuu u ololeynayaa magac aan jirin oo Ahalusuna la yiraahdo siiba Ahmed C/Salaan dowladii dalka hogaamineysana waxeyba ka dhigatay Safiir?.
La soco qeybteena labaad oo aanu kaka hadli doono qaabka ay diyaarada Jubba uga howlgali jirtay gudaha Soomaaliya xiligii dagaalada sokeeye ayna garab u sii jintay hadana u siiso siyaasadahii qariban ee Hasan Daahir Aweys ka wado dalka taasi oo lagu xasuusto in ay shirkadu sabab u aheyd ku soo noqoshadii dalka Soomaaliya uu ku soo laabtay Hasan Daahir ka hor intii uusan dagaal dheer la galin dowladii uu hogaaminayey Sheik Shariif.
Shirkada Jubba Airweys waxey hada rajo ka qabtaa in lagu wareejiyo shaqadii ay qaban jirtay Somali Airline meesha ay arintaas shirkada iyo dowlada u kala mareyso ayaan dhawaan bulshada u soo bandhigi doonaa iyo sida ay siyaasada Soomaaliya iyo in aan la helin qaran Soomaaliyeed madaxa shirkada iyo kooxaha aan hor ku soo sheegnay.
Waa wax wanaagsan in ay daboolaan baahida shacabka shirkadaha ay leeyahiin muwaadiniinta Soomaaliyeed waxaase muhiim ah in ay dowladu u guurasho qaabkii ay dalka uga soo shaqeeyeen amaba ganacsatada qaarkood ugu lug lahaayeen dagaalada sokeeye. warbixin dhameystiran iyo qaabka degaanada gobolka Galgaduud qeybta ay ka degan yahiin beesha C/qasim Salaad ay dadka ugala degaan gawaarida degaankooda mareysa iyo sida ay ugu gacan geliyaan kooxda Shabaab.
· admin on April 08 2014 14:10:36 · 0 Comments · 1876 Reads ·
14,667,280 unique visits